Mazuva ano, vanhu vanobhadhara zvakanyanya nekunakisisa kune mhando uye dhizaini yeinotungamirwa yegirazi yekugezera kabati. Semuyenzaniso, midziyo yemumba yekugezera haifanirwe kungova nechitarisiko chakanaka uye kushongedza asiwo inowedzera basa rekuchengetedza chimbuzi. Zvisinei, kune akawanda marudzi emagetsi ekugezera anotengeswa pamusika. Mushure mekushandiswa kwenguva refu, iyo deformation yekabinet inowanzoitika. Nzira yekudzivirira iyi mamiriro? Tevere Frank anogovera nzira dzinoverengeka dzekudzivirira kusarudzika kwezvinhu zvisina basa zvekugezera uye makabati.
Kazhinji kutaura, kushanduka kwekamuri yekugezera kunonyanya kukonzerwa nezvinhu zvitatu zvinotevera:
Chekutanga ndechekuti kusarudzwa uye mhando yezvigadzirwa haina kusvika padanho; chechipiri ndechekuti iyo firimu yekudzivirira iri pamusoro pezvinhu zvinokanganiswa nekuda kwekuputika panguva yekufambisa; chechitatu ndechekuti chimbuzi chakanyorova zvakanyanya uye huni dzinoburitswa munzvimbo ine hunyoro kwenguva yakareba.
Tarisa matanho ekudzivirira.
1.Kutanga Kwazvose, paunenge uchisarudza imba yekugezera kabati, mhando yayo yakakosha.
Kune akawanda marudzi emakamuri ekugezera pamusika, saka zviri nyore kuti isu tivhiringike kana uchisarudza. Kazhinji kutaura, yemhando yakanaka, mhando uye mushure-kutengesa zvakavimbiswa zvakanyanya. Mushure mekuwana imba yekugezera, kutanga Kwazvose, tarisisa kana paine mapundu pamusoro pechinhu. Kana zviripo, tsvaga mutengesi kuti aridzosere munguva.
2.Paunenge uchiisa bhesheni rekugezera pane yekugezera madziro makabati, iyo yakabatanidzwa inofanira kuiswa chisimbiso negirazi glue. Uku kudzivirira iwo mupfu wemvura kuti usapinda mukabati kuburikidza negeji, izvo zvinotungamira kune hunyoro munzvimbo yese yekuchengetera, zvichikonzera kushanduka kwezvinhu uye kunyangwe hwema hunoshamisa. Panguva ino, kabhini yekugezera haigone chete kutora chinzvimbo mukuchengetedza asi zvakare inokanganisa mamiriro ezuva rese.
3. Kuti uderedze pesvedzero yekunyorova pane yekugezera kabati, chimbuzi chinofanira kuchengetedzwa kuti chipenye.
Vhura windows uye fan fan yekugezera mumba yekugezera inofanirwa, zvirinani kuve kugona kugona kuoma yakakamurwa kuparadzaniswa. Panguva imwe, une zvirinani kusarudza imba yekugezera kabhodhi ine yakakwira makabati gumbo, uye ne 304 simbi isina tsoka, kumashure kwekabati kuri nani kusaswedera pamadziro, kuitira kuti zvinyatso kuparadzanisa unyoro pasi uye madziro.
4.Kazhinji zvakare teerera kutarisa kwekugadziriswa kwekodhi yekugezera, suka nguva nenguva mvura pane kabhoni.
Muhupenyu, kupararira kwemvura kweyeshawa bhatani uye tap hazvadzivisiki. Zvisinei, mubatanidzwa pakati pebheseni netafura zvinofanirwa kuchengetwa zvisina kuomeswa kudzivirira mvura inoputika kuti igare pamusoro pekabhodhi kwenguva yakareba, zvichikonzera kushomeka kwezvinhu zvekabati. Panguva ino, sarudza foam mupfumi, nyoro yemvura yakapfava inzira yakanaka yekudzivirira imba yekugezera kabati.
Pamusoro ndidzo hunyanzvi hwekuchengetedza iyo yakatungamirwa yegirazi yekugezera kabati. Kana iwe uchida mamwe mazano eunyanzvi uye ruzivo mune iyo nzira yekutenga yekushambidzika yekushambadzira makabati, ndokumbirawo ubate Frank.
Matagi: LED yekugezera girazi kabati, Matipi ekuchengetedza emabhatiri asina maturo makabati